Gudoomiyaha gobolka Banaadir oo shacabka degmada Warta-Nabadds ku amaanay sidau ciidanka ula shaqeeyaan. – The Voice of Northeastern Kenya
Gudoomiyaha gobolka Banaadir oo shacabka degmada Warta-Nabadds ku amaanay sidau ciidanka ula shaqeeyaan.
Duqa magaalada Muqdisho Ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yariisow) ayaa uga mahadceliyey shacabka Caasimadda ku nool, gaar ahaan Degmada Warta-Nabadda sida ay Ciidanka amaanka gacanta uga siiyaan sugidda ammaanka magaalada
Guddoomiyaha ayaa sheegay in xalay Booliisku ay gacanta ku soo dhigeen qof bam gacmeed tuuray, kadib markii ay shacabka degmadu gacan ku siiyeen Ciidamadda ammaanka ee howgalka fulinayay.
Eng. Yarisow ayaa tilmaamay in kooxaha argagixisada ay meel walba uga dabatagayaan, maadaama ay bulshada Caasimaddu Soomaaliya diyaar u yiiin inay kaalintooda ka qaataan cid walba oo carqaladeynaysa ammaanka.
Duqa Muqdisho ayaa ku ammaanay bulshada ku nool Gobolka Banaadir inay had iyo jeer ka digtoon yihiin kuwa geysta falalka amnidarro, waxuna ku dhiirigeliyey inay sii wadaan kaalintooda ku aaddan sugidda amniga.
Xalay ayaa Nin hubeysan waxaa uu weerar bambaano ku qaaday fariisin Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ay ku leeyihiin meel u dhow Saldhigga degmada Warta-Nabada, isagoo kadibna galay guri ay deganaayeeen dad Shacab ah.
Ciidamada Ammaanka ayaa intaasi kadib waxay hareereeyeen gurigii uu galay,waxaana mudo saacado ah ay isweeydaarsanayeen rasaas, sida ay sheegeen dadka degan agagaarka guriga uu Ninkaasi gudaha u galay.
Mas’uuliyiin dhinaca Ammaanka ah iyo Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in Ninka Bambada ku weeraray Fariisnka Ciidan,kadibna galay Guri ku yaalla inta u dhaxeysa Furayaasha iyo Isgoyska Cali Kamiin uu u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray rasaas ay ku rideen Ciidamada Dowladda.
← Baarlamaanka Soomaaliya oo Maanta kulan Yeelanaya.
Ismaamulada Garissa iyo Kilifi oo laga hirgalin doono mashruuca korontada cadceedda →